Argagax ka dhashay Libaax waardiye ka ah guri la degan yahay | Xaysimo
Home War Argagax ka dhashay Libaax waardiye ka ah guri la degan yahay
Argagax ka dhashay Libaax waardiye ka ah guri la degan yahay
Mas’uuliyiinta Dowladda Nigeria ayaa saaray libaax loo adeegsaday in lagu ilaaliyo guri ku yaalo Magaalada Lagos ee dalkaas.
Libaaxan laba sano jirka ah ayaa ahaa mid ilaalin jiray guri la degan yahay, oo waxaa keenssaday qofkii lahaa gurigaas, si uu uga ilaaliyo waxkasta oo amni dari ku keeni kara.
Arrintan la yaabka leh ayaa waxaa ay tahay in halka guriga uu ilaalinayay libaaxa uu ku yaalo iskool ay wax ka bartaan caruur, taasna ay keentay in cabsi uu ku beermo waalidiinta dhashay caruurta.
Mas’uuliyiinta Dowladda ee qaabilsan xannaanada xoolaha aya soo arkay libaaxan, kadib markii walaac laga muujiyay badqabka ardayda wax ka dhiganayay iskoolkaas.
Madaxa guddi loo xil saaray wax ka qabashda arrintan ayaa BBC-da u sheegay in maalin ka hor libaaxa laga saaray halkii uu joogay ee uu ilaalada uga jiray, kadibna loo gudbiyay beerta xannaanada xoolaha ee Bogije Omu, oo ku taala deegaanka Lekki.
Dowladda Nigeria ayaa milkiilaha libaaxa ku amartay in uu iska xaadiriyo saldhiga booliska, haddii sidaas uu sameyn waayana xabsiga loo taxaabi doono.
Tallaabadan ay Dowladda qaaday ayaa timid, kadib markii sidoo kale shacabka ku nool agagaarka xaafadda uu libaaxa joogay ay cabsi la soo daristay, maadaama libaaxu uu yahay xayawaan halis ah oo aan looga baranin in uu ilaaliyo guryaha.
Koox ka socota ilaalinta deegaanka ee Dowladda Nigeria iyo ciidan gaar ah oo wax iska caabinta qaabilsan ayaa libaaxa soo qabtay, kadib markii dadka deegaanku ay u dacwoodeen wasaaradda deegaanka ee qaabilsan xayawaanka duur-joogta.
Libaaxa ayaa halkaas la geeyay laba bilood kahor, si uu u ilaaliyo guriga qofka keensaday, waxaana marwalba uu taagnaa albaabka guriga, oo uu kala socday dhaqdhaqaaqa dhismaha.
Inkastoo uu 60-kaas maalmood joogay halkaas ayaa hadana waxaa lagu baraarugay libaaxa maalmo kahor, maadaama uu ka ag dhawaa iskool ay wax ka bartaan caruur badan, waxaana sido kale joogitaanka libaaxa ee halkaas walaac ka muujiyay maamulka iskoolka oo sheegay in ay ka walwaleen badqabka caruurta.
Way adag tahay in inta badan caalamka lagu arko libaax loo adeegsanayo wardiye ahaan, oo libaaxa inta badan waa xayawaan duur-jooga ah oo khatar ah, dadkana waxyeeleya.
Inta la ogyahay eyga ayaa ah xayawaanka keliya ee loo adeegsado ilaalinta dhismayaasha iyo baaritaanada, balse waxaa muuqata in ninkan u dhashay Nigeria uu doonayo in gurigiisa uu ilaaliyo libaax ay adag tahay in xitaa bidhaantiisa ay arkaan bani’adamka.
Dalalka Carabta ayaa inta badan lagu arkaa shakhsiyaad wata Shabeelka ama harimcad la carbiyay, kuwaas oo ku kaxeysta baabuurta, si ay ugu xaragoodaan.